Iibso NADH (cusbada disodium) (606-68-8) hplc≥98% - Wisdomtiwder
Budada NADH waxay u taagan tahay "nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) + hydrogen (H)." Kiimikadan waxay ku dhacdaa si dabiici ah jirka waxayna door ku leedahay habka kiimikada ee dhaliya tamarta. Dadku waxay u isticmaalaan kaabis NADH daawo ahaan.
NADH (cusbada disodium) (606-68-8) fiidiyaha
NADH (cusbada disodium) Saldhigga Macluumaadka
magaca NADH (cusbada disodium)
Magaca kiimikada beta-Nicotinamide adenine dinucleotide cusbada disodium (NADH 2Na)
Isku mid ahaanshaha NADH (cusbada disodium)
Formula kelli C21H27N7Na2O14P2
Miisaanka kelli 709.4 g / mol
Muhiimadda InChI QRGNQKGQENGQSE-WUEGHLCSSA-L
Codsiga NADH waxaa loo isticmaalaa hagaajinta caddeynta maskaxda, feejignaanta, feejignaanta, iyo xusuusta; iyo sidoo kale daaweynta cudurka Alzheimer iyo waallida. Sababtoo ah doorkeeda wax soo saarka tamarta, NADH waxaa sidoo kale loo isticmaalaa hagaajinta waxqabadka isboortiga iyo daaweynta daaweynta daalka daalka (CFS).
NADH (cusbada disodium) Tilmaanta guud
Budada NADH, ama nicotinamide adenine dinucleotide, ayaa jirkaaga laga sameeyaa niacin, oo ah nooc ka mid ah fiitamiin B-ga. Budada NADH waxay door ka ciyaareysaa abuurista tamarta jirka waxaana mararka qaarkood loo qaataa qaab dheeri ah si loogu daaweeyo cilladda daalka daba dheeraatay (oo sidoo kale loo yaqaan 'myalgic encephalomyelitis ama ME / CFS).
Xirfadleyda kale waxay aaminsan yihiin in NADH ay kor u qaadi karto heerarka tamarta ayna hagaajin karto hufnaanta maskaxda, feejignaanta, feejignaanta, iyo xusuusta. Ciyaartoyda qaarkood xitaa waxay qaataan NADH si kor loogu qaado waxqabadka iyo adkeysiga. In kasta oo ay jiraan natiijooyin rajo leh, caddaymaha taageeraya isticmaalka NADH badanaa waa isku dhafan yihiin ama is burinayaan.
NADH (cusbada disodium) (606-68-8) Taariikh
NADH waa qaabka la dhimay ee NAD +, NAD +na waa nooca loo yaqaan oksijiinta ee NADH, coenzyme ka kooban ribosylnicotinamide 5a-diphosphate oo lagu lifaaqay adenosine 5′-fosfate ee isku xidhka pyrophosphate. Waxaa si ballaaran looga helaa dabeecadda waxayna ku lug leedahay fal-celin badan oo enzymatic ah taas oo u adeegta sida qalabka korantada iyadoo lagu beddelayo oksijiin (NAD +) iyo hoos u dhig (NADH). Waxay sameysaa NADP iyadoo lagu darayo koox fosfateed ah booska 2 of ee adenosyl nucleotide iyadoo loo marayo isku xirka ester.
NADH (cusbada disodium) Nidaamka Ficil
NADH ay soo saaraan jirkeena waxay ku lug leedahay sameynta tamar jirka. In kasta oo ay jiraan caddayn muujineysa in kaabayaasha NADH ay yareyn karaan cadaadiska dhiigga, hoos u dhigi karaan kolestaroolka, ka caawin karaan cilladda daal ee joogtada ah adoo siinaya tamar, iyo kordhinta calaamadaha neerfaha ee dadka qaba cudurka Parkinson, ma jirto macluumaad ku filan oo lagu ogaado sida loo hubiyo ama haddii kaabayaashaasi ay yihiin shaqo.
NADH (cusbada disodium) (606-68-8) Codsi
Taageerayaasha kaabayaasha NADH waxay rumeysan yihiin inay kor u qaadi karaan saameynta dabiiciga ah ee NADH ee maskaxda. Qaarkood xitaa waxay ku fogaadaan inay soo jeediyaan inay soo celin karaan xusuusta iyo shaqada garashada ee dadka qaba cudurka Alzheimers.
Inta badan cilmi-baarista hadda socota ayaa diiradda lagu saaray isticmaalka NADH ee daaweynta ME / CFS. Inta badan caddayntu waa sheeko xasaasi ah ama ku saleysan mala awaal macquul ah halkii ay ka ahaan lahayd xaqiiqda caafimaad.
Qaar ka mid ah fikradaha ku saabsan sababta NADH faa'iido u yeelan karto:
NADH waxay ka caawisaa enzymes-ka jirkaaga inuu cuntada u beddelo tamarta qaab adenosine triphosphate (ATP). Daraasadaha ayaa sheegaya in dadka qaarkood ee qaba ME / CFS ay leeyihiin heerar hoose oo ATP ah.
Cilmi baaristu waxay sidoo kale muujineysaa in NADH ay kicin karto shaqada maskaxda, oo laga yaabo inay gacan ka geyso dib u dhiska garashada maskaxda ee la xiriirta ME / CFS.
NADH waxay yareyn kartaa daalka iyadoo dib u soo celineysa shaqadii mitochondria (qaabab aad u yar oo awooda unugyadaada). ME / CFS waxaa la rumeysan yahay inay kujirto naaquska cudurka mitochondrial.
NADH waxaa laga yaabaa inay maskaxdaada ka caawiso inuu abuuro neurotransmitters (farriinta kiimikada) ee saameeya niyadda iyo shaqada garashada (oo ay ku jiraan serotonin, norepinephrine, iyo dopamine.)
NADH (cusbada disodium) (606-68-8) Daraasad dheeri ah
Xitaa waxaa jira baaritaanno socda oo ku saabsan in NADH, oo lagu keenay cirbad ama xidid la geliyay (xidid), ay gaabin karto horumarka cudurka Parkinson.
NADH (cusbada disodium) (606-68-8) Tixraac